Iindaba -Ubawo onomntwana usenokukhupha "umhlaba webhodi yomdlalo"
Wakhe wambona utata onakekela umntwana?
Ezingqondweni zabantu abaninzi, ootata babakhathalele abantwana babo = "abangenankathalo". Kodwa eHuddersfield, e-UK, kukho utata onjalo, kwinkqubo yokhathalelo lwabantwana bakhe kungekuphela nje okuhle, kwaye ngendlela, uyile nomdlalo webhodi.
Izimvo kwitafile yesidlo sangokuhlwa
Danngutata oneminyaka engama-45 ubudala wabantwana abathathu onobomi obonwabisayo bosapho. Ngo-2020, ukuqhambuka ngesiquphe kwanyanzela abantwana ukuba bayeke isikolo, kwayeDan kwafuneka ndihlale ekhaya nabantwana.
Ngolunye usuku, Dan wayesenza umsebenzi wakhe wasekhaya kunye nentombi yakhe Cora. Ukusukela oko i-COVID-19, abantwana baphila ubomi obufanayo yonke imihla: yitya, yenza umsebenzi wasekhaya, udlale, ulale. Abaziboni izihlobo zabo; abakwazi ukuphefumla umoya omtsha ngaphandle.Dan Yayikhathazekile kukubona Coraajike abe yintaka ethinjiweyo. Uye wacinga msinya wathiCora"Hayi, uyafuna ukudlala umdlalo webhodi?" “Kodwa Tata, sidlala imidlalo yebhodi yonke imihla…” “Ungathini ngokudlala umdlalo webhodi okwethu ngeli xesha?”
Kwaye ke konke kwaqala
Sebenzisa CoraIndlela abayithandayo yokudlala indima, bazimisele ukwenza umhlaba omnandi ngokufanayo Izisele kunye neDragons. Ukuyila abalinganiswa, ukuyila amabali…Cora kwaye Dan Babanjiswe kwintombazana-ntombazana.
Kwafika ibhalbhu yokukhanyisa
Emva kwe- Epiphany wabelane ngeenkcukacha ezithile kuFacebook, igcisa eligama UGary King ipeyintiwe CoraIfoto kwaye, ngecala, ipeyinte ikhava. Yile inshorensi yenziweyoDan Yazi ukuba lo ingangumdlalo webhodi opapashwayo.
Kunye UKimUncedo, CoraImizobo yeza ebomini, kwaye basebenze kunye ukwenza i-trailer yomdlalo. Ukusuka apho,CoraQuestUdumo luye lwadlala ikhephu.
Ukufumana ingqwalaselo ngakumbi kunye nenkxaso, benze i-demo ekwi-Intanethi apho abadlali banokuthi bacebise utshintsho. Iwebhusayithi esemthethweni isasazeke kumazwe kubandakanya i-United States, iPoland, iDenmark, iSweden, iJamani neKhanada, kunye namawaka abantwana abathatha inxaxheba kuyilo lomdlalo. Benze zonke iintlobo zabalinganiswa, ubuchule, amakhadi obutyebi…
Eyona nto yayijolise kuyo yayiyi- $ 12,060, eyayiyixabiso leeseti ezingama-400 zomdlalo, kodwa yagqitha kulindelo nje kwimizuzu engama-40 emva kokuba umdlalo uphile. Kwiphulo lokubuyiselwa kwemali eliphelileyo, umdlalo uphakamise i- £ 150,000.
Lo ngumdlalo wokudlala indima ofanelekileyo kubantu aba-1-4 nangaphezulu kweminyaka emi-6. Uza kudlala iqhawe, uphonononge namaqabane akho, uphephe imigibe, ulwe neerhamncwa, kwaye ekugqibeleni ugcine inkwenkwana egama linguKevin. Kukho amanqanaba amathathu kumjikelo ngamnye: inqanaba lesenzo, inqanaba lesilo kunye nenqanaba lokubala. Kwinqanaba lesenzo, umdlali usebenze iqhawe kwaye ahlangane nezenzo ezinje ngokuhamba, ukuhlasela, ukukhangela, kunye nokutshintsha izinto.
Xa umdlali ehlasela, kufuneka aqengqe idayisi. Uphawu lumele impumelelo kwaye ukungabinanto kubonisa ukungaphumeleli. Ukuba umdlali akakhange abethe i-monster, ikhadi lomlingiswa liya kuguqulwa kwelinye icala kude kube yimpumelelo. Umntu ngamnye unobuntu bakhe (okt, izakhono), njengokukwazi ukuphinda uqengqe idayisi ngelixa uhlasela. Igama, impilo kunye namanqaku esenzo somdlalo anokwenziwa ngokwezifiso:
Kwinqanaba le-monster, i-monster nganye kufuneka isebenze kwaye ihlasele abalinganiswa abasondeleyo okanye ihambise inani elithile lamanyathelo (kuxhomekeke kwinqanaba lesenzo).
Umdlalo uneBoss enkulu, isigcawu, esisongelo kumdlali rhoqo. Kwinqanaba lokubala kwakhona, isigcawu esikhulu seBoss siza kuvela, kwaye sikulungele ukukuzingela nanini na.
Kutheni ithandwa kangaka?
Yonke imidlalo yahlukile, eyenza abadlali bonwabe kakhulu. Abanye abenzi beenethiwekhi bathi, "andikaze ndiyifumane iluncedo kangaka i-KS."
Sword intombazana yaba ngumlinganiswa wokuqala wadala. "Emva kwexesha, abantu abaninzi bajoyine ukuyilwa kwentombazana yeSword, nayo eye yaziwa njengomdlalo."Dan usixelele.
“Ikhadi lobutyebi uthango emdlalweni watsalwa yinkwenkwe yaseMelika, egama linguRaya. ” Danyalatha kula makhadi, njengabo bonke ubuncwane bakhe. Emdlalweni, unokwenza umlinganiswa wakho, isixhobo sakho, uprinte, emva koko ulwe.
Olu luphawu lokuzonwabisa olwenzelwe wena kuphela. Emva kokuba umdlalo ufike kwi-KS, yafumana indumiso ephezulu evela kwinani elikhulu labafundi bezikolo zamabanga aphantsi kunye nabancinane. Emva kwayo yonke loo nto, kude kube ngoku, izikolo zamabanga aphantsi kwamanye amazwe anjengeMelika kunye neUnited Kingdom zisavaliwe. Kwaye abanye abazali banyanzelwe ngabantwana babo ukuba bahlawule ukuze baphume baye kuthetha nabanye. Lo mdlalo sisipho esithunyelwe nguThixo ukubasindisa.
Emva kokuba umdlalo uthandwe, Dan kwaye Cora bakhwele kumaqonga eendaba aphambili. Danusixelele, “Khange ndiyicinge into yokuba isihloko somyili webhodi yomdlalo siza kuwela phezu kwam. Kodwa ngexesha lokuvalelwa sisodwa, yonke into iyadika, sidinga into entsha. ” Nangona kunjalo, impumelelo yomdlalo ayivusangaDanIinjongo. Andifuni ukuba ngumyili wexesha elizeleyo, kwaye ndiyathembaCoraQuest inokufunyanwa ngabapapashi.
Omnye wabazali udlale umdlalo kunye nonyana wakhe oneminyaka esixhenxe ene-ADHD. Umzali uthe, kuphela komdlalo awagqibileyo ukudlala kuwo unyana wakhe. Kwakungekho msindo okanye ixhala ngexesha lomdlalo, kodwa umdlalo uphela wawudlalwe ngokonwaba.
Emva kokufunda ukuba umdlalo uthandwa kakhulu, Corawaxhuma onwabile. "Cora kwaye ndiza kwenza ividiyo malunga neLego elandelayo, kodwa andazi ukuba ndingayenza kakuhle na, ” Dan utshilo.
INkosi nayo yajoyina indalo!
Ukongeza kubantwana abavela kwihlabathi liphela, nabayili bemidlalo yokwenene bajoyine indalo yeli hlabathi.
Umyili UJerry Hawthorne, Oyile imidlalo yebhodi yabantwana eyaziwayo efana ne Indlela yendoda kunye neMouse kwaye IiKnights zoDoli, ingqalelo lo mdlalo kwaye wongeza abalinganiswa bakhe kule adventure.
Oku kubaluleke kakhulu kuthi. Kungenxa yokuba asingabo abalandeli be-UJerry, Kodwa njengoko besinethemba lokuba, uzenzele ilizwe lakhe lokuzonwabisa elisekwe CoraQuest. Kwaye ezi zivele kwi-KS yokubuyisa imali.
"Siyathemba ukuba oku kungakhuthaza ubuchule bomntu wonke kwaye baziveze ngobugcisa nangokubhala, nokuba awenzi kakuhle, awunazintloni."
Lo mdlalo wenziwe Dan kwaye Coraabadumileyo. Imidlalo yabo iwele ekufumaneni imali, kwaye kudliwanondlebe kunye nomabonwakude.
Ngoku, baxakekile bephendula amathandabuzo abantu malunga nomdlalo. KwiDanUmbono, usenoluhlu oluninzi lwabantu ekufuneka ebulelwe. Umdlalo uza kubonakala kungekudala kwiitafile zamazwe amaninzi, athiDan andizange ndiphuphe.
"Senze into enkulu, inene." Dan uxelele intombi yakhe.
Idayisi yesiNtu, Umtya weBhodi yeMidlalo, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Ikhadi lemikhono, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni,